Lolu hambo ukusuka Gatchina ukuba Petersburg ngesitimela nokuhamba kolunye uhlangothi - izindlela ezilula kakhulu futhi ezingabizi ukuze unqobe ibanga phakathi kweNyakatho inhloko-dolobha nendawo esifundeni Leningrad esifundeni. Mhlawumbe emgwaqweni ngemgwaco siqu noma umphakathi uzothola nokubuya ngokushesha. Uma uthanda isitimela, "Gatchina - Petersburg", ukufika endaweni zizokwenzeka imizuzu 35-80. Hlola ingcaca isikimu Gatchina izinkomba kanye nesimiso izitimela ukunyakaza esihlokweni sethu. Khetha isikhathi travel yakho bese uvula uhambo olujabulisayo!
Gatchina - maphakathi wesifunda kanye zokuthutha ihabhu we Okthoba sesitimela
Esikhathini sokuqondisa se Gatchina esifundeni Leningrad esifundeni kuyinto zokuthutha ihabhu ezibalulekile, okuyinto ingxenye Okthoba sesitimela. Eningizimu-ntshonalanga enyakatho dolobha imigqa emibili ziye wabeka ekuqaleni ukuthuthukiswa izitimela eRussia - aseBaltic kanye Warsaw, okuyisona isitimela "Gatchina - St Petersburg". Kukhona umugqa wesitimela kweqa isikhungo wesifunda usuke entshonalanga uye empumalanga.
1. Warsaw noma Luzhskoye isiqondiso - kuyinto umgibeli zokuthutha kusukela Petersburg ukuba Pskov futhi Luga.
2. Baltic umgibeli umugqa kuholela kusukela Petersburg ngokusebenzisa Red Village Gatchina-Baltic.
3. ujantshi, okuyinto sidlula Gatchina-Lezimpahla. It is ikakhulukazi esetshenziselwa ukuthuthwa kwezimpahla.
Kanjani ukusuka Gatchina ukuba Petersburg
Enhloko-dolobha esenyakatho Gatchina ezimbili cishe parallel kujantshi - Warsaw kanye aseBaltic. Izici ngamunye wabo lula ukuziqonda uma ubheka uhambo ingcaca "Gatchina - St Petersburg". Isifanekiso esihlokweni efakwe ohlwini amagama iziteshi phakathi okuyinto kulandele suburban izitimela kagesi. Isikimu ibonisa isikhundla isihlobo iziteshi ezimbili ujantshi Gatchina, ibanga phakathi okuyinto cishe 3 km.
Warsaw esiteshini itholakala ingcosana kusukela enhlokodolobha enyakatho (1 km). Ingxenye izitimela kulo mugqa ngokushesha ukwedlula esinamandla wonke umuntu ihlela ukungena sasilibangise umzila "Gatchina - Petersburg" bese ukubamba indiza ebuyayo.
Kusukela Petersburg ukuba Gatchina ngesitimela
Gatchina kuza eziningi izivakashi nabaphesheya abafisa ukuhlola omunye ezikhangayo edume kunazo Leningrad esifundeni - Gatchina Museum. Ensemble Grand kwezigodlo, amapaki, amachibi amabhuloho futhi emadokodweni, abakhi Russian elalizokwakhiwa e ngasekupheleni kwekhulu XVIII ngu abakhi okhetheke khulu. Phakathi zasemazweni yaleli paki we Isigodlo liphuma esabekayo Gatchina Palace. I umhlobiso eyinhloko elinye ipaki - Priory - lwasemaphusheni esigodlweni-castle nge white walls nophahla abomvu.
On imigqa emibili Okthoba sesitimela ukusebenzisa izitimela kagesi, okuyinto asuke nsuku zonke kusuka esiteshini eyodwa St.Petersburg - Baltic. isakhiwo sakhe liyabonakala isendaweni chibi Dula Canal. Esiteshini esiseduze okufanayo igama ongaphansi komhlaba esiteshini kungokwalabo Kirovsk - Vyborg umugqa. Ngezinye indalo yayo iphiko kwesokunxele esiteshini lavuselelwa futhi ligcwaliswe inkundla, futhi kukhona indlela yokuphuma esitimeleni.
Ukuthi kunezikhathi eziningi lapho uthunyelwa ukuqeqesha "Saint Petersburg - Gatchina-Baltic", kuba imizuzu 60 ngokwesilinganiso. EMU, okulandelayo up-Gatchina Warsaw, ukuhamba kaningi, ukukhetha izindiza kulo mugqa ngaphezulu.
Lapho nginquma ukuthi iyiphi indlela ukukhetha umugqa emzileni "Gatchina - Petersburg", indlela ukuya enhlokodolobha enyakatho yeRussia, abagibeli abaningi baqala uhambo kwabo Warsaw Station wesifunda isikhungo. Ngokusho kulolu chungechunge siphela eside izitimela endaweni efanele, kukhona amathikithi kancane eshibhile.
platform Landelayo emva Warsaw uphethiloli e Gatchina - Tatiana - nayo etholakala ngaphakathi kwemingcele umuzi. Igama elinikeziwe ke ngo-1916 lapho kuhlonishwa eyodwa yamadodakazi Tsar uNicholas II. EMpini Yezwe I Grand Duchess kwaba umhlengikazi. Ngokusikisela Tatiana Nikolaevna, entsha ujantshi platform e Gatchina eyakhelwe ukuthola izitimela esibhedlela ababevela phambi.
Warsaw uphethiloli e Gatchina
Isiteshi sise Ujantshi Square, ne ezisekelweni hamba zokuhambela Warsaw umugqa Petersburg. The ukuphela umgibeli Futhi wenzelwe ukunikeza izingane ukukhonza Luga isiqondiso womgwaqo, ima lapha zonke edabula sesitimela izitimela. On umzila "Gatchina - Petersburg," ibanga epulatifomu maphakathi wesifunda ku-North yenhloko-dolobha - 46 km. Isibalo ezisekelweni ku Warsaw sesitimela - 2 izindlela - 2. sesitimela esiteshini Gatchina ivuliwe nsuku zonke kusukela 5:00 am kuya phakathi kwamabili. On endaweni eduze esiteshini sesitimela kuyinto isiteshi ngoba amabhasi kanye minibuses.
siqeqesha lwezikhathi "Gatchina - Petersburg"
izitimela Movement somhambi ukwenziwa imigqa emibili eziteshini ezimbili futhi Gatchina ngokuzimela. Kukhona izakhi ezivamile, ezifana izinguquko lwezikhathi zamanje athunyelwe ku iBhodi electronic esiteshini ngalinye. Ngokuvamile, ngosuku lapho izitimela kukhanselwa, zaziwa kusengaphambili. isimiso samanje ukuhamba izitimela kagesi ezindaweni suburban itholakala kwi-website ye inkampani isiRashiya, inikeza umgibeli wesitimela zokuthutha, kuhlanganise imigqa aseBaltic.
siqeqesha lwezikhathi "Gatchina - Petersburg" has kumawebhusayithi ahlukahlukene ukwazisa mayelana ukuhamba izitimela kagesi eRussia. Ngokuvamile, igrafu yitafula kuyiphi ungabona ezokufika isikhathi, ukuvama ukunyakaza. Njengoba isibonelo, isheduli ekuseni izitimela wahlukana Warsaw esiteshini Gatchina. Kuyinto elula kakhulu abagibeli uma echaziwe isikhathi sokuhamba kanye neminye imininingwane ewusizo.
Baltic umgibeli umugqa
Lesi sakhiwo samanje esiteshini abagibeli Gatchina Baltic Line - lesithathu kusukela ekuqaleni le ngxenye ujantshi. Isiteshi sokuqala senziwa ngokhuni futhi ayikwazanga ukuthatha umgibeli ukugeleza ezinkulu. Ngo-1889 edolobheni lakha isiteshi esisha emgqeni aseBaltic, kodwa labhujiswa amaNazi phakathi nomsebenzi (1941-1944.). Emashumini eminyaka ngemva kwempi, sakhiwo kabusha futhi.
Station "Baltic Gatchina - St Petersburg". esimisweni izitimela
Kufanele kuqashelwe ukuthi iningi izindiza imigqa emibili usebenza nsuku zonke. I Isikhala phakathi somhambi izitimela ngokwesilinganiso 1 ngehora. Kukhona ngezikhathi isikhathi esifitjhani begodu isikhathi eside. Esikhathini lokuqala nasekugcwalisekeni ikhefu ntambama phakathi kusukwe kuya esiteshini Baltic Gatchina akwazi ukuxoxa amahora 2-3, kodwa lokhu kungathatha izikhathi ezingaphezu kuka 1-2 ngosuku. Izincwajana zemininingwane "Gatchina - Petersburg" ithunyelwe wamanje isizini isheduli 2014-2015 esinikezwe kulesi sihloko.
Izincwajana zemininingwane, okuyinto isuka esiteshini phezu aseBaltic umugqa, kwenza umuntu afanelwe stop xaxa edolobheni - at yesikhulumi neMarienburg. Ezingomakhelwane igama elifanayo wavula isonto eyakhelwe ngasekupheleni XIX leminyaka, kunezinye ezikhangayo ukuthi kungenziwa wavakashela.
Ubude uhambo futhi intengo ithikithi indiza "Gatchina - Petersburg" ukuze kuxhomeke ohlotsheni yohambo. Ngokwesilinganiso, indlela omunye iziteshi ezimbili Gatchina ukuba Petersburg kuthatha imizuzu engu-35 kuya ku-1 ihora nemizuzu engu-20. Ensimini ka-Leningrad esifundeni ngo-August 2014 anda yamanani on uhambo suburban izitimela. Intengo ithikithi isitimela nsuku zonke "Baltic-Gatchina - Petersburg" ifinyelele ruble 88. Phakathi nohambo kusukela Warsaw esiteshini luhamba luye ohlangothini olulodwa udinga ukukhokha ruble 86. Ungakwazi ukuthenga nsuku zonke noma ukubhaliswa kwenyanga. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe kuqala uhla 750-780 ruble (izinsuku 5).
Yini umugqa ukukhetha uhambo Gatchina
Uma uhamba ngesitimela, qiniseka ukuhlola schedule, "Petersburg - Gatchina", elitholakala kwi ebhodini electronic aseBaltic Isiteshi sesitimela. I design yalesi ukwakhiwa ngempumelelo wasebenzisa ingilazi ophahleni, okwenza kube elikhanyayo, Airy. Ngaphandle esiteshini lihlotshiswe amawashi esiyindilinga brand odumile "UPavel Khulula". Kolunye kabusha emnyango emaphakathi kanye komzila zihanjiswe. Ngaphansi Dome ingilazi kwaba ihholo, ikamelo ukulinda, namahhovisi.
Futhi lapho iziteshi ezimbili Gatchina eseduze ezikhangayo esemqoka edolobheni? Lo mbuzo ivamise ukucelwa ngezinye izivakashi abaya lapho ngesitimela. Baltic Station umugqa itholakala eduze eyinhloko yokungena kwepaki esigodlweni.
Station "Warsaw-Passenger" iseduze Priory Park. Phakathi iziteshi ezimbili nezinye izikhumbuzo walondoloza bokwakha XVIII - XX eminyaka. Ezinye zazo kungenziwa wavakashela ngosuku olulodwa. Kungcono eze ukuqeqesha ekuseni ukuze ube nesikhathi ukuhambahamba zonke izingxenye ezithakazelisayo isigodlo kanye epaki Ensemble.
Ukubuyekeza: sibhedlela "Parus" (Anapa) - indawo ephelele uphumule
Royal Castle (Kaliningrad): umlando, incazelo
"I-Cote d'Azuri" (ukuzilibazisa isikhungo), Votkinsk - nendawo enkulu sokuba siphumele endaweni yemvelo